Kedu ihe bụ odometer na gịnị ka ọ bụ maka? Network Meteorology
Ugbu a a na-eji ngwaọrụ iji tụọ anya njem nke ihe na-agagharị na-agagharị na ọ mụbara n'ụgbọala dị ka odometer. A na-akpọ ngwa a odometer. A makwaara ya site na aha onye nyocha na odometer. Ttụle kilomita kilomita na inwe ike ịlele anya ka a na-ejikarị arụ ọrụ ugbo, ergometry, nchekwa okporo ụzọ na ụfọdụ ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile na arụ ọrụ nke odometer.
2 Mechanical odometer
4 Atụmatụ iji ghara ịghọgbu
Ngwa ihe ntanetị a dị anya na-amalite site na ihe dị iche na arụmọrụ dabere na ụdị. Ma ọ bụ analog ma ọ bụ ngwaọrụ dijitalụ, anyị ga-amarịrị ihe ndị na-eme ka ngwaọrụ a rụọ ọrụ.
Ka anyị lee ihe akụkụ nke odometer bụ:
Wiring ka wiil: Ndị a bụ eriri nke ọrụ ya bụ inwe ike iji nkwurịta okwu n'etiti mgbatị nke wiil ahụ na mita ahụ. Na-enweghị mgbanwe a ọ gaghị enwe ike igosi data na panel. Ntuziaka ndị a pụtara na ụdị odometers abụọ ahụ.
Gear: gia na-elekọta nke ịme ihe nlele. Gia bụ ihe akara ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị na ọ bụ ihe na-akọwa ngụkọta ogologo njem.
Isi na mgbịrịgba magnetik: mgbịrịgba ahụ bụ mgbakwunye na ntọala nke na-enweta ike ma ọ bụ ihe na-enyere aka ikwe ka mmegharị nke gia gbanwee ka ọ bụrụ ike electromagnetic.
E nwere ụdị odometers dị iche iche dabere na ọdịdị na ojiji a kpọlitere inye. Anyi nwere aka nke igwe odometer na, n’ aka nke ozo, odometer dijital. Onye ọ bụla n’ime ha nwere ọrụ dị iche iche ma nwee njirimara ndị ọzọ.
A na-akpọkwa igwe odometer wiil odometer. Ọ bụ ọrụ maka ịgụta oge ọ bụla ọ gbanwere zuru oke ma gaa ebe dị anya na gburugburu ya. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịgụta ọnụọgụ laps ị na-eme, ị nwere ike ịmata oke ụzọ njem niile ị gara. Ihe odometer a bu ihe mejuputara usoro nke ghari nwere onu ogugu di iche na onu ha. Nọmba ndị a na-agbakwunye na wiilị ma na-ekwurịta okwu site na usoro nke eriri.
A ga-edozi ngarita nke igwe odometer n'ụzọ zuru oke ka ọ bụrụ ọ nwere ike ịkwaga n'otu ọsọ ma na-agbanwe agbanwe na ntụgharị nke ọ na-eme na wiilị. Nke a bụ etu enwere ike iji tụọ ụzọ dị anya n'ụzọ ziri ezi. Ozugbo ọ gara ebe dị anya anyị chọrọ, ọ na-egosi ogologo njem anyị gosipụtara na nkeji nke anyị tinyeburu ya na mbụ. Ngwunye ndị a na-ejikarị bụ kilomita na kilomita.
Anyi aghaghi ima na igwe odometer nwere eze di iche iche ma nke obula n’ime ha n’aghari n’olu di iche. A na-ahụ ọtụtụ ụdị odometers a n'ụgbọala ndị dị afọ ole na ole. Ndị a odometers iru elu nke 99.999 kilomita na n'oge ahụ ọ tụgharịrị wee laghachi na 00 000. Ọtụtụ mgbe, ha na-abịa na counter ọzọ nke na-egosi ọnụọgụgụ oge ọ ruru n'ogo ya.
Ebe ọ bụ na a na-ejikarị aka rụọ ọrụ nke kachasị odometers mepụtara na ụgbọ ala, ejirila ya dị ka aghụghọ na ahia ahia ụgbọ ala nke abụọ. Ma ọ bụ na ị nwere ike gbanwee ọnụọgụ nke odometer gosipụtara ma belata ya. Nke a na - enye gị ohere izochi ọnụ ọgụgụ kilomita nke ụgbọala ahụ gbalitere kemgbe ọ wuru ya. Site na mbenata ọnụ ọgụgụ nke kilomita ị nwere ike ịgagharị ma kwuo na ụgbọ ala ahụ nwere obere njem karịa ka ọ na-eme.
Enwere ụdị odometer ọzọ, nke ọgbara ọhụrụ nke na-edekọ ebe dị anya site n'iji mgbawa kọmputa. Enwere ike ịgụ akwụkwọ ọgụgụ na ngosipụta dijitalụ nke uru ya bara a na-echekwa ya na isi ihe elektrọnik. Nyere na echere ya na mbata nke teknụzụ ozi na ụdị ụdị ihe a, ọ ga-ekwe omume ịkwụsị aghụghọ nke ụgbọala ndị ọzọ, nke a abụghị ikpe. Ma ọ bụ na ndị mmadụ hụrụ ụzọ iji nwee ike gbanwee ụkpụrụ ndị edebanyere aha na kọmpụta ụgbọ ala ahụ.
Ihe a niile ebutela aghụghọ na odometer nke ụgbọala ndị ọzọ. Ọtụtụ ihe na-emetụta ọnụahịa ire ere nke ụgbọ ala nke abụọ. O sina dị, otu n’ime ihe ndị kacha emetụta bụ ọtụtụ kilomita ndị ị gara. N'agbanyeghị afọ ole ụgbọ ala ahụ kemgbe kemgbe ụlọ ọrụ ya, a ghaghị iburu ngụkọta njem niile na akaụntụ. Enwere ndị nwere ụgbọ ala ihe karịrị afọ ise ma jisie ike na-eji ya. N'okwu a, anyị ga-enwe ụgbọ ala kara nka mana obere agbara. Nke a na-enyere anyị aka ịmata na akụkụ gị adịghị ka eyi ka ha si eji ya.
Ọ bụrụ na njirimara niile nke ụgbọ ahụ bụ otu ihe dị n’etiti ha abụọ, nke nwere obere kilomita ga-aka ọnụ. Nke a na - eme ka ịme ihe Odometer nha abụwo omume zuru ebe niile. Ntugharị a dabere na ịdọrọ odometer, na-ebugharị usoro gia ruo mgbe uru achọrọ gosipụtara, na itinye odometer azụ na ụgbọala ahụ.
Atụmatụ iji ghara ịghọgbu
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụgbọ ala ọhụrụ ọkara ma ọ nwere puku kilomita iri atọ ma ọ bụ obere, kwesịrị ị kwesịrị ị ka nwere gị na mbụ na taya. Ọ bụrụ na ị hụ ụgbọala ochie ma jiri obere agbara ihe mbụ bụ ịlele uwe nke osooso, breeki na njigide njigide. Iji ghara ịdaba na ojoro, ọ kachasị mma ịnye akwụkwọ edemede ma ọ bụ ihe akaebe nke amụma amụma mmezi nke ụgbọala ahụ. Akwụkwọ ego ndị a na-egosikarị nọmba kilomita nke ụgbọ ala ahụ nwere mgbe nyocha ahụ gafere.
Ọ bụrụ na odometer bụ n'ibu, ọnụ ọgụgụ ga-zuru oke kwekọọ. Ọ bụrụ na ha na-agbanye ngwa ngwa mgbe ị kụrụ ogwe ahụ, ọ ga-abụrịrị na e mebiri ya. N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ezie na ị na-enwe obi abụọ banyere ọnọdụ nke ụgbọala ahụ, ọ kachasị mma ịga ọrụ ọkachamara nke ga-eme nyocha zuru ezu nke injin ahụ na igwe ọrụ niile nke ụgbọ ala ahụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere odometer bụ otu o si arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Odometer